မြင့်မားသောအပူချိန် Pulse Bag ကောက်ခံရေး
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအပူချိန် Pulse Bag ကောက်ခံရေး(24 များအတွက်စုစုပေါင်း မြင့်မားသောအပူချိန် Pulse Bag ကောက်ခံရေး ထုတ်ကုန်များ)
မြင့်မားသောအပူချိန် Pulse Bag ကောက်ခံရေး - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ မြင့်မားသောအပူချိန် Pulse Bag ကောက်ခံရေး ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား မြင့်မားသောအပူချိန် Pulse Bag ကောက်ခံရေး / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် မြင့်မားသောအပူချိန် Pulse Bag ကောက်ခံရေး များထဲမှ Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. ။
စက်မှုဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူများအတွက်အပူပေးသည့် FMS Baghouse စစ်ထုတ်သည့်အိတ်များ
မူလအစရာ: ဘီဘိုမြို့၊ ဟီဘီပြည်နယ်၊ တရုတ်
tag ကို: ရေစိုခံသော FMS Filter ဖုန်အိတ် , ဖန်မျှင်ထည်စစ်ထုတ်အိတ် , ဘိလပ်မြေ polyester စက်ရုံ၏အိတ်
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ အားသာချက်များ ၁။ စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးသောဖိုင်ဘာပစ္စည်းနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ခေတ်မီအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေး၊...
စက်မှုအပူချိန်မြင့်မားသောဘိလပ်မြေ PPS filter bag
tag ကို: ရုပ်ရှင် Mulching Bag Filter Bag , ဖုန်ကောက်ခံသည့်အိတ် , မြို့ပတ်ရထားအိတ် filter ကိုအိတ်
ကုမ္ပဏီတွင်ကျွမ်းကျင်သောဒီဇိုင်းသုတေသနအဖွဲ့ရှိသည်။ ဖောက်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုမှုကိုလွယ်ကူစေသည်။ ကုမ္ပဏီမှဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားသည့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဖုန်မှုန့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သူများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ထုတ်ကုန်များကိုရေနံ၊...
ဘိလပ်မြေ Baghouse များအတွက် Polyester filterbag
tag ကို: ကျောက်တုံးဖုန်စစ်အိတ် , မိုင်းဖုန်စစ်ထုတ်အိတ် , acrylic ဖုန်အိတ်
အထည်အိတ်၏ရှည်လျားသောဘဝလေးခုဒြပ်စင် 1. သင့်လျော်သော filter ကိုပစ္စည်းကိုရွေးပါ အပူချိန်၊ အပူချိန်နှင့်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အရွယ်အစား၊ အလေးချိန်၊ ပုံသဏ္,ာန်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ဖုန်မှုန့်အာရုံစူးစိုက်မှု၊ filtration မြန်နှုန်း၊...
စက်မှုအငွေ့ baghouse ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း
tag ကို: စက်မှုအငွေ့ Baghouse ဖုန်ကောက်ခံရေး , မီးခိုးဖုန်အိတ် filter
Filter ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာများတွင်အိတ် filter နှင့် granular အလွှာဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူများပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အများအားဖြင့်အော်ဂဲနစ်ဖိုင်ဘာသို့မဟုတ်အော်ဂဲနစ်ဖိုင်ဘာထည်များကိုစစ်အိတ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။...
tag ကို: Pulse Valve မြှေး , Pulse Valve မြှေးစျေး , ဖုန်စုဆောင်း Fittings
လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်များ၏အသုံးပြုမှုအတွက်ဖြစ်နိုင်သောပြproblemsနာများ 1. ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့် electromagnetic pulse အဆို့ရှင်ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်, ယိုစိမ့်မှုသည်တပ်ဆင်ရာတွင်အသုံးအများဆုံးပြproblemနာဖြစ်သည်။ လေထုယိုစိမ့်မှု၊...
pulsed ဂျက် solenoid အဆို့ရှင်၏ရော်ဘာမြှေး
tag ကို: static မှိုရော်ဘာမြှေးအဆို့ရှင် , အဆိုးရွားဆုံးရော်ဘာမြှေး , အခမဲ့နမူနာ Pulse Valve Solenoid မြှေး
Pulse အဆို့ရှင်မြှေးအလုပ်လုပ်နိယာမ: Pulse အဆို့ရှင်အမြှေးပါးသည်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်ကိုလေထုခန်းနှစ်ခုခွဲသည်။ Pulse အိတ်စစ်ထုတ်မှု၏ဖုန်မှုန့်သန့်ရှင်းရေးစနစ်အတွင်းရှိလျှပ်စစ်သံလိုက်အား Pulse အဆို့ရှင်သည်သန့်ရှင်းသော compressed air...
လျှပ်စစ်သံလိုက် pulse အဆို့ရှင်၏ရော်ဘာမြှေး
tag ကို: ဓာတ်ငွေ့ Regulato များအတွက်မြှေး Valve , စံအဆုတ်အမြှေး Valve , ဖုန်ထူသောတာဘိုင်မြှေး
ဖွဲ့စည်းပုံစွမ်းဆောင်ရည် ၎င်းကိုကော်သို့မဟုတ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောအလွှာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်း၏ပုံသဏ္toာန်အရ, အမြှေးပါးဖိအား၏နည်းလမ်းကွဲပြားသည်။...
စက်မှုအိတ် filter ကို duster နှင့်အတူ pulse ဂျက်လေယာဉ်
tag ကို: စက်မှုအိတ်အမျိုးအစား Pulse ဂျက် Filter , Pulse ဂျက်လေယာဉ် filter , စက်မှု Pulsed ဂျက်လေယာဉ် Deduster
ပေါက်ကွဲမှုအပေါ်ဖုန်မှုန့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အမှုန်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖုန်မှုန့်စုစည်းမှုနှင့်လောင်ကျွမ်းနိုင်သောဖုန်မှုန့်ပေါက်ကွဲမှုများသည်ဖုန်မှုန့်များ၏အနိမ့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်ဆုံးအဆင့်တွင်တည်ရှိသည်။ အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှု၊ အမှုန်အရွယ်အစား၊...
မြင့်မားသောထိရောက်မှု pulsed ဂျက်စုဆောင်း
tag ကို: မြင့်မားသောထိရောက်မှု Pulse ဂျက်ဖုန်စုဆောင်း , လေထုညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ရေးစက်ဖုန်ဖယ်ရှားရေး , Pulsed ဂျက်စုဆောင်း
အလုပ်လုပ်အခြေခံ ဖုန်မှုန့်ဓာတ်ငွေ့ကိုပြွန်ပုံး (သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းရှိအောက်ပိုင်းရှိအဖွင့်အပိတ်) မှ filter chamber ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီး၊ ကြမ်းမှုန်များသည်ပြာခူကောင်သို့မဟုတ်ပြာဘင်သို့တိုက်ရိုက်ကျသည်။ ဖုန်မှုန့်ဓာတ်ငွေ့ကို filter အိတ်မှ ဖြတ်၍...
စက်မှုစက်ယန္တရား Pulse အဆို့ရှင်အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း
tag ကို: အိတ်အမျိုးအစားဖုန်စုပ်စက်၏စျေးနှုန်း , အိတ်အမျိုးအစားဖုန်စုပ်စက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု , Bag Type ဖုန်စုပ်စက်အသုံးပြုခြင်း
နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများ (၁) ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာများမလိုအပ်ပါ။ ၄ င်းသည် ၁၀၀၀ မီလီဂရမ် / m3 ဖုန်မှုန့်များကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ကုသနိုင်ပြီး ၅၀ မီလီဂရမ် / m3 အောက်လျော့ထုတ်နိုင်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုးရှင်းပါသည်။ (၂)...
Bag Type Back Blow အိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်းသူ
tag ကို: Backblown ဖုန်ကောက်ခံရေး , DDF ဖုန်စုဆောင်း , DDF အကြီးစား Reverse Blow Deduster
DDF အိတ်ကြီးနောက်ကျောမှုတ်ဆေးထိုးအသေးစိတ်အသေးစိတ်မိတ်ဆက်: DDF - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ စက်ရုံများ၊ သံမဏိစက်ရုံများ၊ ဘိလပ်မြေစက်ရုံများ၊ ကာဗွန်နက်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအရည်ကျိုခြင်း၊...
လေအေးပေးစက်အမျိုးအစား Pulse- ဂျက်အိတ် filter ကို
tag ကို: စက်မှု Pulsed ဖုန်ကောက်ခံရေး , စက်မှုအထည်အိတ်စုဆောင်းစက် , အိတ်အမျိုးအစားဖုန်စုပ်စက်
၂၀၁၈ NEW အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး dmc pulse အိတ်စစ်စက်ဂိုဒေါင်ခေါင်မိုးဖုန်မှုန့်စုဆောင်း / အစိမ်းရောင်စစ်စက်သန့်ရှင်းရေးစက် အဝတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း / ဖုန်မှုန့် / ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးစနစ်လုပ်ငန်းမူ - ၁။ ဖုန်ထူသောလေသည်အိတ်စစ်စစ်ထဲသို့ဝင်သည်။ အိတ် filter...
ဓာတ်ငွေ့ box ကိုဖုန်မှုန့်စုဆောင်း pulsed
min ။ အမိန့်: 1 Others
tag ကို: မြင့်မားသောထိရောက်မှု Pulse ကောက်ခံရေး , Air Chamber အမျိုးအစား Pulse-jet Bag Filter , အရည်အသွေးမြင့် Pulse စုဆောင်း
PPC လေသေတ္တာအမျိုးအစား Pulse အထည်အိတ် filter ကိုထုတ်ကုန်ထုတ်ကုန်: PPC လေထုသေတ္တာအိတ် pulse အိတ်စစ်ထုတ်စက်သည်စုစုပေါင်းသတ်မှတ်ချက် ၃၃ မျိုး၊ အခန်းတစ်ခန်းစီတွင် ၃၂၊ ၆၄၊ ၉၆၊ ၁၂၈၊ အိတ်၊ ဖုန်အိတ်လေးခုအမျိုးအစားသည် ၂၄၅၀ မီလီမီတာနှင့် ၃၀၆၀ မီလီမီတာ ၂...
စက်မှု Pulse အိတ် filter ကို
tag ကို: Pulse- ဂျက်လေယာဉ်အိတ်ဖုန်စုဆောင်း , Pulse Bag filter , မြင့်မားသောထိရောက်မှုအထည်အလိပ်ဖုန်စုဆောင်း
Pulse အိတ် filter ကို Pulse Bag filter သည်မြင့်မားသောထိရောက်မှုရှိသည့် Pulse အိတ် filter အသစ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအိတ် filter ကို အခြေခံ၍ တိုးတက်သည်။ Pulse Bag filter ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ပြုပြင်ထားသော pulse bag filter...
စက်မှုစျေးနှုန်း Filter Bag အိတ်ဘိလပ်မြေစက်ရုံ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 1000 / Set/Sets
ထုပ်ပိုး: ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းထုပ်ပိုးခြင်းအသေးစိတ်များစံတင်ပို့မှုဆိုင်ရာထုပ်ပိုးမှု - စစ်ထုတ်သည့်ကိုယ်ထည်အတွက်အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်း၊ အလွှာအတွက်လိုအပ်သောအကာအကွယ်၊ စစ်ထုတ်အိတ်များအတွက်သေတ္တာပုံးထုပ်ခြင်းစသည်။
tag ကို: စက်မှုဖုန်ကောက်ခံရေး , အိတ်ဖုန်စုဆောင်းပါ , အရည်အသွေးမြင့်မားသောဖုန်စုပ်စက်
အိတ် filter ကိုမှုတ်ပြန် Pulse Pulse back မှုတ်အိတ် filter သည်အဆင့်မြင့်။ အကျိုးရှိရှိအိတ်အမျိုးအစားဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လေထုကြီးများနှင့်ကောင်းမွန်သောဖုန်မှုန့်သန့်စင်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု၊...
Pulse အဆို့ရှင်အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်မှု 24V dedusting
tag ကို: ADC12 solenoid Valve , လေဖိအားကယ်ဆယ်ရေး solenoid Valve , ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် 24V solenoid အဆို့ရှင်
အလုပ်လုပ်အခြေခံ diaphragm သည် electromagnetic pulse အဆို့ရှင်အားရှေ့နှင့်နောက်ရှိလေယာဉ်ခန်းနှစ်ခုအဖြစ်ခွဲခြားသည်။ compressed air သည်နောက်လေထုအခန်းရှိအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာအပေါက်မှတဆင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ diaphragm သည်အဆို့ရှင်၏ထွက်ပေါက်သို့ရောက်သွားပြီး...
ဆီလီကွန်စစ်အိတ်နှင့်အတူ Pulse အိတ် filter ကို
tag ကို: Cage အရိုး filter , ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းအိတ်များဘိလပ်မြေစက်ရုံ , အိတ်ကိတ်အရိုးစစ်ထုတ်
silicone ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်း၏ဘောင်ကိုခိုင်ခံ့သောဂဟေနှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ အရိုးစုသည်စီစစ်အိတ်၏နံရိုးဖြစ်ပြီးဆီလီကွန်အရိုးစု၏အရည်အသွေးသည်စစ်ထုတ်အိတ်၏လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေနှင့်သက်တမ်းကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။...
တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည် MC အမျိုးအစား Pulse အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း
tag ကို: MC Pulse Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံသူ , Site Pulse Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံသူ , အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွင်း Pulse အိတ် filter
လျှောက်လွှာနယ်ပယ် ၎င်းကိုအစားအစာ၊ ဆေးဝါး၊ အစာ၊ သတ္တု၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ဘိလပ်မြေ၊ စက်မှု၊ ဓာတု၊ လျှပ်စစ်၊ အလုပ်လုပ်အခြေခံ ဖုန်မှုန့်ဓာတ်ငွေ့ကိုပြွန်ပုံး (သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းရှိအောက်ပိုင်းရှိအဖွင့်အပိတ်) မှ filter chamber ထဲသို့ ၀...
ဘွိုင်လာ Pulse အိတ် filter ကို
tag ကို: ဘွိုင်လာ Pulse Deduster , ဘွိုင်လာအိတ်ဖုန်ကောက်ခံသူ , Pulse Bag filter
ဘွိုင်လာ၏ pulsate အိတ်မှဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူများအလုပ်လုပ်သည့်နိယာမ အလယ်ဘောင်၊ အထည်အိတ်၊ ပြာသန့်ရှင်းရေးနှင့်လေမှုတ်စက်များပါဝင်သည်။ အလုပ်လုပ်သောအခါမြင့်မားသောအပူချိန် flue ဓာတ်ငွေ့ပြာပုံး၏ဝင်ပေါက်ကနေပြာပုံးသို့စီးဆင်း။...
Dmy-y-76s electromagnetic pulse အဆို့ရှင်သည်
tag ကို: Pulse Solenoid Valve စံ , Pulse Solenoid Valve အရွယ်အစား , Dmy-y-76s Electromagnetic Pulse Valve
ညာဘက်ထောင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်သည် ၉၀ ဒီဂရီလေ ၀ င်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်ပိုက်၏ ၉၀ ဒီဂရီညာဘက်ထောင့်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။...
tag ကို: မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဖုန်စုဆောင်း , Hot Sale နှင့်အတူဖုန်စုဆောင်း , အရည်အသွေးမြင့်ဆိုင်ကလုန်းစုဆောင်းသူ
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မုန်တိုင်းဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအသေးစိတ်အချက်အလက်များ: CLTA ဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်းမှုကိုအပိုင်းသုံးပိုင်း၊ လေဘီးဆလင်ဒါ၊ စုဆောင်းသောပုံးနှင့် volute (သို့မဟုတ်လေအဖုံး) တစ်ခုပါဝင်သည်။ ဆလင်ဒါအရေအတွက်အရတစ်ခုတည်း၊ နှစ်ဆ၊ သုံး၊ လေး၊...
min ။ အမိန့်: 3000 Piece/Pieces
tag ကို: မြင့်မားသောထိရောက်မှု filter ကိုအိတ် , Non- ယက် Nomex Filter အိတ်များ , Air Dust Collector အတွက်စစ်ထုတ်အိတ်များ
Ackaging & Delivery Packaging Details စံတင်ပို့ကုန်ထုပ်ပိုး: ပလပ်စတစ်အိတ်တွင် Filter Bag အဖုံးနှင့်ထုပ်ရန်။ ငွေသွင်းပြီးနောက်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန်အပြင်ဘက်တွင်သန္တာကျောက်ပြားပေါ်ပုံးထည့်ခြင်း Facial...
စက်မှုလုပ်ငန်းထည့်သွင်းအိတ် Pulse ဖုန်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းကိရိယာများ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 5000 / Piece/Pieces
tag ကို: Flat Bag ဖုန်ကောက်ခံသူ , Pulse ဖုန်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်း , Hot Sell အထည်ဖုန်ကောက်ခံခြင်း
လည်ပတ်မှုနိယာမ Pulse အိတ်စစ်ထုတ်စက်သည်ခြောက်သွေ့သောဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို filter separator ဟုလည်းလူသိများသည်။ ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာမှဖုန်မှုန့်များကိုဖမ်းယူရန်ဖိုင်ဘာ knitting bag filter element ကိုအသုံးပြုသည်။ filter...
tag ကို: တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည် MC Type Pulse Bag ဖုန်စုပ်စက်
ဤအမျိုးအစားဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူများသည်အဆင့်မြင့်သောနိုင်ငံတကာနည်းပညာများကိုအသုံးပြုသည်။ နှင့်ပြောင်းလဲမှုအချိန်တိုတို, တည်ငြိမ်လည်ပတ်မှု, ကောင်းသောသန့်ရှင်းရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။...
စက်မှုဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသူများအတွက်အပူပေးသည့် FMS Baghouse စစ်ထုတ်သည့်အိတ်များ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုအပူချိန်မြင့်မားသောဘိလပ်မြေ PPS filter bag အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဘိလပ်မြေ Baghouse များအတွက် Polyester filterbag အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုအငွေ့ baghouse ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Pulse အဆို့ရှင်ရော်ဘာမြှေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
pulsed ဂျက် solenoid အဆို့ရှင်၏ရော်ဘာမြှေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လျှပ်စစ်သံလိုက် pulse အဆို့ရှင်၏ရော်ဘာမြှေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုအိတ် filter ကို duster နှင့်အတူ pulse ဂျက်လေယာဉ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောထိရောက်မှု pulsed ဂျက်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုစက်ယန္တရား Pulse အဆို့ရှင်အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Bag Type Back Blow အိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်းသူ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လေအေးပေးစက်အမျိုးအစား Pulse- ဂျက်အိတ် filter ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဓာတ်ငွေ့ box ကိုဖုန်မှုန့်စုဆောင်း pulsed အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှု Pulse အိတ် filter ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုစျေးနှုန်း Filter Bag အိတ်ဘိလပ်မြေစက်ရုံ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Pulse အဆို့ရှင်အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်မှု 24V dedusting အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆီလီကွန်စစ်အိတ်နှင့်အတူ Pulse အိတ် filter ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည် MC အမျိုးအစား Pulse အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဘွိုင်လာ Pulse အိတ် filter ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Dmy-y-76s electromagnetic pulse အဆို့ရှင်သည် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Delta ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုလုပ်ငန်းထည့်သွင်းအိတ် Pulse ဖုန်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းကိရိယာများ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale မြင့်မားသောအပူချိန် Pulse Bag ကောက်ခံရေး from China, Need to find cheap မြင့်မားသောအပူချိန် Pulse Bag ကောက်ခံရေး as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on မြင့်မားသောအပူချိန် Pulse Bag ကောက်ခံရေး produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our မြင့်မားသောအပူချိန် Pulse Bag ကောက်ခံရေး, We'll reply you in fastest.
ထိရောက်သော desulphurization ရေ Processor ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. All rights reserved ။